हामी सबै थाहा छ, त्यहाँ अक्सर दुर्लभ छन्, तर जीन्स लगाउने। यो सहज वस्त्र - यो व्यावहारिकता र स्थायित्व को undisputed नेता। तथापि, बाक्लो कडा कपडा (डेनिम), सामान्यतया जीन्स सी जो, कहिलेकाहीं केही असुविधा ल्याउँछ। सबै भन्दा साधारण एक - यो धेरै लामो dries।
यो एक भारी आंसुहरु को मिटाना समयमा खुट्टा जीन्स तपाईं छाता अन्तर्गत देखि बाहिर क्रल छैन पनि भने, भिजेको र फोहोर प्राप्त गर्ने हुन्छ। वा अर्को मामला: गल्ति चिया वा कफी को प्यान्ट सारा मग मा गिरा। वा रात प्यान्ट लागि सुक्खामा समय छैन, र अब चिसो छाला घृणा गर्छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी द्रुत जीन्स सुक्खामा मा के गर्न?
एक फिक्का साबुन दाग, यदि कुनै पनि सुरू छ। - यो प्रदूषण सामना गर्न यो निश्चित एक शक्ति हुनेछ, पाठ्यक्रम "कसरी जीन्स, धुन" हातमा लुगा धुने मेसिन छ भने, यो प्रश्नको जवाफ स्पष्ट छ: र त्यसपछि अर्को प्रश्न तानाबाना बिकसित हुँदैछ। यस प्रदूषण पहिले नै कपडा मा खाएको छ भने, पूर्व-फिक्का निश्चित हुन! वर्तमान मोडेल वस्तु अब भिजेको, तर बस अलिकति नम छ, जो पछि थप स्पिन समारोह, छ, र यो सहमत हुनेछ, यो धेरै द्रुत जीन्स सुक्खामा कसरी कार्य सरल छ। तर हात मा कार भने, यो एकदम उपयुक्त र पारंपरिक आर्थिक, र सुगंधित साबुन छ। साबुन संग पानी चलिरहेको र राम्ररी चिस्यान बाहिर squeeze अन्तर्गत Zamoyte स्थान।
को जीन्स लुगा धुने पछि सुक्खामा र काम गर्न अहिले यहाँ हुनुपर्छ जाने समय छैन भने तुरुन्तै जीन्स सुक्खामा कसरी सर्वोत्तम मार्ग सामान्य इस्त्री हुनेछ। बस यो तातो छ कि zalosnilis सीट seams छैन ऊतक को एक पत्र मार्फत तिनीहरूलाई फलाम फलाम। pockets र बेल्ट को क्षेत्र विशेष ध्यान - यी ठाउँहरू टाँका को ठूलो संख्या कारण सुक्खामा मुश्किल हुन्छन्, सायद तिनीहरूले पूर्ण परिणाम लागि धेरै पटक ironed गर्न आवश्यक छ।
कसरी द्रुत जीन्स सुक्खामा: अर्को बाटो
अर्को विधि सामान्य hairdryer सुक्खामा छ। सुरु गर्न, कपडे देखि अतिरिक्त चिस्यान हटाउन। यो गर्न, एक फ्लफी तौलिया लिन भिजेको सुरुवाल मा र्याप र दृढ भएको tourniquet मोड। ठूलो प्रभाव - यो तौलिया भिजेको हुन्छ भने, अर्को एउटा प्रयोग। त्यसपछि एक हेयर ड्रायर लिन र तीतो अन्त गर्न जीन्स पूर्ण शक्ति सुक्खामा, तर कपडा बाल्न छैन ताकि यसलाई प्रयोग नगर्नुहोस् नजिक। खैर, तपाईं घरमा छैनन् भने, कुनै पनि कोठरी मा हात ड्रायर संग यस्तै विधि प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुहोस्, तपाईं अलिकति बढी समय आवश्यक हुन सक्छ, तर परिणाम तपाईं सबै नै हासिल गर्नेछ।
तर चाँडै घर मा जिन्स सुक्खामा कसरी सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका, ओवन मा सुखाने छ। सुरु गर्न, यो सखाप गर्नुपर्छ, त्यसैले जिन्स खरिद छैन अनावश्यक खाना Smells वा तेल देखि दाग। त्यसपछि उच्चतम तापमान गर्न ताप मा बारी र यो संवहन मोड सेट गर्न मनमोहक छ। जिन्स ओवन ढोका प्रत्येक पक्षमा 10 मिनेट को लागि ajar र सुक्खा एकछिन पर्ख।
अब, तपाईं यस्तो समस्या के छ भने, भिजेको सुरुवाल रूपमा, तपाईं निराश गरिनेछ। आखिर, अब भनेर कसरी कुनै पनि ट्राउजर वा आफ्नो मूड खराब बिना, जीन्स सुक्खामा थाहा छ।
मुसा लागि कक्षहरू
रजत फक्स संग छालाको ज्याकेट - क्लासिक फैशन
- यो के आकार छ 2XL: वस्त्र को विकल्प को रहस्य?
बच्चाहरु को लागि तालिका अनुपालन जुत्ता आकार
छोराछोरीको वस्त्र आकार र जुत्ता
ओवनमा आटामा काट्लेट। आटामा एक कलेट कसरी पकाउने?
उडान मिसिन र अन्य उडान हालतमा मा "GTA" मा कोड
ट्रांसफार्मर-रूमाल - फैशन रुझान 2015
गोलान हाइट्स, इजरायल: विवरण, वर्णन र इतिहास
अस्थमा प्रयोग लागूऔषधको उपचार
अश्वशक्ति बाल - यो वास्तविक हो?
रक्सी मृत्यु। रगतमा रक्सीको सामग्री। सस्तो वोदका। रक्सी विषाक्तता